Breakthrough! Kioxia dia namokatra vokatra fahatsiarovana flash NAND milanja 170-layer - YIC International Co Limited |Ny mpamatsy fitaovana elektronika mihodina |www.YIC-Electronics.com
Home > News > Breakthrough! Kioxia dia namokatra vokatra fahatsiarovana flash NAND milanja 170-layer
Breakthrough! Kioxia dia namokatra vokatra fahatsiarovana flash NAND milanja 170-layer
Ny mpamokatra puce japoney Kioxia dia namorona fahatsiarovana flash NAND manodidina ny 170 ary nahazo an'ity haitao farany ity miaraka amin'i Micron sy SK Hynix.
Ny Nikkei Asian Review dia nitatitra fa ity fahatsiarovana NAND vaovao ity dia niara-novolavola niaraka tamin'ny Western Digital, mpiara-miasa amin'i Etazonia, ary ny hafainganan'ny fanoratana ny angon-drakitra dia mihoatra ny in-droa noho ny vokatra ambony Kioxia (112 sosona).
Ho fanampin'izany, Kioxia dia nahavita nametraka sela fahatsiarovana bebe kokoa ihany koa isaky ny sosona NAND vaovao, izay midika fa raha ampitahaina amin'ny fahatsiarovana ny fahaiza-manao mitovy dia afaka mampihena ny chip amin'ny 30% mahery izy io. Ny chips kely dia hamela ny fahafaha-manao bebe kokoa amin'ny fananganana telefaona finday, mpizara ary vokatra hafa.
Voalaza fa mikasa ny hanangana ny NAND vaovao i Kioxia amin'ny fihaonambe iraisampirenena miaro ny fanjakana, ary antenaina hanomboka ny famokarana betsaka hatramin'ny voalohan'ny taona.
Miaraka amin'ny fiakaran'ny teknolojia 5G sy ny ambaratonga lehibe kokoa ary ny fandefasana data haingana dia haingana, Kioxia dia manantena ny hampiakatra ny fangatahana mifandraika amin'ny foibe angon-drakitra sy finday marani-tsaina. Na izany aza, nihahery ny fifaninanana amin'ity sehatra ity. Micron sy SK Hynix dia nanambara ny NAND miisa 176 alohan'ny Kioxia.
Mba hampitomboana ny vokatry ny fahatsiarovana an-tselatra, Kioxia sy Western Digital dia mikasa ny hanangana orinasa 1 trillion yen ($ 9 45 miliara) any Yokkaichi, Japan amin'ity lohataona ity. Ny tanjon'izy ireo dia ny hanokatra ny tsipika famokarana voalohany amin'ny 2022. Ho fanampin'izany, Kioxia dia nahazo orinasa maro koa teo akaikin'ny orinasa Kitakami any Japon mba hahafahany manitatra ny fahaizan'ny famokarana arak'izay ilaina amin'ny ho avy.